Indlu ka-Henrietta - I-Airbnb
Iqhugwane likamalusi ibungazwe ngu-Mitzi
U-Mitzi Ungumbungazi ovelele
I-Henrietta's Hut iyindawo ehlekisayo, ebizwa ngokuthi i-Shepherds Hut, eqanjwe ngomnikazi wangaphambili we-Heritage Property lapho inqola ihlala khona.
U-Henrietta, wake wahlala kuleli kheli futhi watshala i-lavender nezimbali engadini ukuze enze insipho nezinto zokugcoba.
Itholakala kalula phakathi kwe-Queenstown ne-Arrowtown, lesi isisekelo esihle sokuhlehla futhi ngemva kokuhlola yonke into ethengiswayo emhlabeni jikelele.
Izakhiwo zokwenza itiye nekhofi kuhlanganisiwe kanye nesiqandisi kanye ne-toaster, ngeshwa ukupheka akuvunyelwe ngaphakathi enqoleni futhi azikho izinto zokupheka ezinikeziwe.
Amaqhugwane abelusi bendabuko ayesetshenziswa abelusi ngesikhathi bekhulisa izimvu. Ukusetshenziswa kwamaqhugwana okwelusa abalimi kwafinyelela umvuthwandaba ngasekupheleni kwekhulu le-19 futhi kwancipha ngekhulu lama-20 ngokufika kwemishini yasemapulazini eyimishini. Namuhla amaningi ala maqhugwana asephinde ahlonyiswa ukuze ahlinzeke ngendawo yokuhlala evamile.
4.95 · 221 okushiwo abanye
Kutholwe imizuzu eyi-15 ukushayela usuka e-Queenstown CBD noma e-Arrowtown endaweni eshisayo enelanga, enendawo engadini. Eduze kwebhuloho elidala lomlando iShotover River eduze ne-The Old Ferry Hotel Bed & Breakfast. Izindlela ezibanzi zokuhamba/zamabhayisikili ziseduze kweminyango yethu. Ukuqashwa kwamabhayisikili kungahlelwa. Ukubhuka kanye nolwazi ngayo yonke imisebenzi yase-Queenstown etholakalayo, ngakho-ke zizwe ukhululekile ukungena olwazini lwethu lwendawo.
I-Henrietta's Hut itholakala engadini eyimfihlo ye-Bed & Breakfast yethu. Njengababungazi sihlala endaweni eyakhelene yendawo kodwa sihluke ngokuphelele, sinikeza izivakashi zethu ubumfihlo. Nokho siyatholakala ukuze sikusize nganoma yiluphi ulwazi, iseluleko ngemisebenzi, yokudlela njll ukuze sikusize wenze okungcono kakhulu ngokuhlala kwakho kwe-Queenstown.
I-Henrietta's Hut itholakala engadini eyimfihlo ye-Bed & Breakfast yethu. Njengababungazi sihlala endaweni eyakhelene yendawo kodwa sihluke ngokuphelele, sinikeza izivakashi zethu…
UMitzi Ungumbungazi ovelele